काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ‘गर्भ’ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा ! |काभ्रेमा आफ्नै बाबुको ‘गर्भ’ बोकेर छोरीले जन्माइन छोरा ! – हिपमत
अविवाहित १७ बर्षिया छोरीले बच्चा ज-न्माएपछि आफ्नै बाबुको ग’र्भ बोकेको खु’लासा भएको छ । बालिकाले शनिबार राति अस्पतालमा बालकलाई जन्म दिईन् । रामेछाप जिल्ला मन्थली घर भई बनेपा ७ मा डेरा गरी मजदुरी गरी बस्ने ४० बर्षिय गोकर्ण कामीले आफ्नै छोरीलाई ग’र्भ बोकाएको स्विकारेका छन् । उनी निर्माण क्षेत्रका मजदुर हुन् भने श्रीमती र छोरी होटल मजदुर हुन् । यो खबर नेपाल समाचार पत्रमा मोतीराम तिमल्सिनाले लेखेका छन ।